Sina Wholesale Wholesale soccer pinnies sports team ekipa fiofanana ekipa mpilalao baolina kitra baolina kitra olon-dehibe fiofanana Vests Training mpanamboatra sy mpamatsy | RE-HUO
Ambongadiny soccer soccer pinnies sports team
Vonona ny hifaninana:Ampiasao ireto akanjo ba baolina kitra miloko isan-karazany ireto ho an'ny lalao ekipa. Azonao atao ny mamantatra tsara ny mpiara-miasa sy ny mpanohitra eny an-kianja.
Volavola mahafinaritra:Vita amin'ny polyester, ny pinny baolina kitra tsirairay dia azo sasana amin'ny milina, maivana ary miaraka amin'ny sisiny misokatra ho an'ny rivotra. Mahafinaritra ny mitafy, mitazona anao ho tsara mandritra ny fifaninanana masiaka.
Volavola manokana: Banga izany - mba hahafahanao manavaka manokana.
Vita amin'ny 100% polyester harato misy fehikibo elastika roa. Mora apetraka ary esorina.
Lavorary ho an'ny fanatanjahan-tena toy ny basikety, baolina kitra, baolina kitra, volley ary maro hafa. Tena tsara ho an'ny ekipan'ny ekipa sy ny asan'ny ekipa.
Karazana vokatra: Akanjo fanofanana Scrimmage
Material: 105gsm polyester 100%
Brands: Serivisy OEM
endri-javatra: Miaina, maina haingana, Plus size, Anti-pilling, Eco-friendly
Color: Mena / Volomboasary / manga manga / Fluorescence maitso / Yellow
Ao amin'ny akanjo fiofanana amin'ny stock.
Ho an'ny akanjo fiofanana amin'ny stock stock, ny MOQ anay dia singa 50, ary afaka misafidy habe sy loko maro ianao.
Raha toa ka tsy manana loko tianao ny voalaza etsy ambony, dia manana serivisy lamba namboarina koa izahay, afaka manamboatra lamba arakaraka ny zavatra takinao ianao, mila manome ny lokon'ny lamba Pantone fotsiny ianao na mandefa tapa-damba any amin'ny orinasa.
Ity ny tabilao habe izay tahirizinay, Manome serivisy habe namboarina izahay.
Manana pirinty vita amin'ny landy, pirinty sublimation dye, pirinty DGT, amboradara, fanontam-pirinty hafanana, fanontana tsy misy fotony, fanontana tombo-kase volafotsy / volamena, fanontana offset, fanontana rano.
Azonao atao ny misafidy fomba fanontana iray na maromaro hanaovana lamaody kokoa ny akanjo fampiofanana anao.
Alefanao aminay ny volavolanao ary hosoratanay araka ny fangatahanao izany, raha tsy fantatrao ny fomba fanaovana endrika akanjo fiofanana, azonao atao ny mandefa anay ny sary famantarana na ny hevitrao, ary ny mpamorona anay dia afaka mamita ny endrika ho anao.
Manome marika manokana sy serivisy fanamarihana natokana ho anao izahay, manamboatra akanjo fiofanana miaraka amin'ny marikao manokana.
Raisinay ny fanontanina manerana an'izao tontolo izao, tsy misy baiko kely loatra ary tsy misy baiko lehibe loatra.
Previous: Akanjo polyester maina maina ambongadiny ho an'ny t-shirt sublimation namboarina ho fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana
Manaraka: Olon-dehibe - ekipa jadim-panatanjahan-tena momba ny Scrimsage an'ny zatovo Pinnies Sports Vest Soccer, Football, baibolin'ny Basketball
Akanjo fohy vita amin'ny landihazo fohy fotsiny ...
Ambongadiny ambony kalitao lava tanana tsotra t shir ...
fiarovana azo antoka fiarovana azo jerena stri ...